Deg deg: Director Sajid Khan oo Housefull 4 laga saaray iyo fadeexada soo wajahday oo meel xun gaartay!! – Filimside.net
Deg deg: Director Sajid Khan oo Housefull 4 laga saaray iyo fadeexada soo wajahday oo meel xun gaartay!!
Culeeska soo wajahay awgeed Director Sajid Khan waaba laga saaray filimka Housefull 4 oo uu Director ka ahaa madaama lagu heesto inuu labo atirisho Saloni Chopra & Rachel White tacadi ku saleesan dhanka jinsiga u geestay.
Akshay Kumar ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka hadlay dambiga loo heesto Director Sajid Khan wuxuuna Kumar amar ku bixiyay in gabi ahaanba la joojiyo shaqada filimka Housefull 4 sidoo kalena la baaro Sajid Khan eedeeynta lagu heesto waxa ka run ah.
Balse arinka waa sii cuslaaday wuxuuna Director Sajid Khan ku qasbanaaday in shaqada Housefull 4 uu isaga baxo madaama arin culus lagu heesto.
Sajid Khan qoraal rasmi ah ayuu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wuxuuna u qornaa sida hoos ka muuqato asigoo culees badan saaran yahay:
Anigoo ka fal celinaayo eedeymaha la ii soo jeediyay iyo cadaadiska lasoo saaray qoyskeyga, filim qarash gareeyaheyga, jilaayaasheyda filimkeyga Housefull 4. Waxaan ku qasbanaaday inaan qaato go’aan maskaxeed ah inaan isaga baxay shaqada aan Housefull 4 ka haayay!
Mana isla xariirin doono shaqo walbo oo Housefull 4 laga haayo ilaa aan ka cadeenayo waxa runta ama xaqiiqada tahay…
Waxaan si naxariis ku jirto kaga codsanayaa saaxiibadeyda dhanka saxaafada inaysan xukun aan xaqiiqo noqonin dadka u gudbinin ilaa runta ay kasoo baxeyso.
Xaalka meel culus ayuu marayaa wuxuuna yeeshay saameyn xoogan barnaamijka Me Too Movement ee haweenka tacadiga loo geestay ku dhiiri galinaayo inay banaanka soo dhigaan gabood falka dadka awooda badan u geesteen oo ay in mudo ah la aamusnaayeen.